Nanambara ny fepetra voafaritra ao amin'ny Meizu MX6 Ubuntu Edition vaovao Ubunlog
Taorian'ny tsaho sy vaovao marobe momba ny a terminal vaovao avy amin'ny orinasa Meizu, Ny sary sy ny pitsopitsony ara-teknika an'ny Meizu MX6 Ubuntu Edition vaovao dia natao ofisialy. Fantsona misy fahaiza-manao tsara mametraka anao eo afovoan'ireo finday avo lenta. Toa somary avo ny vidiny raha ampitahaintsika amin'ny solosaina manana toetra mampiavaka azy nefa miaraka amin'ny rafitra Android, saingy manana ny vidiny ny Ubuntu Touch.
Ny famakafakana ireo mampiavaka an'ity terminal vaovao ity dia antenaina ho singa tsara kokoa, satria, ho an'ireo izay azo ampiasaina amin'ny finday, dia sarotra azontsika atao ny manasongadina ny mpikirakira azy deca-core Helio X20, bateria avo lenta izay hanome antsika fampiasana tsara mandritra ny ora maro ary fakan-tsary misy vahaolana tsara.
Teo aloha dia efa nilaza taminay izahay hoe inona ny masontsivana tianay ho hita ao amin'ny terminal Meizu sy Canonical vaovao, sendika izay manome fitaovana tsara dia tsara ho antsika, toy ny Meizu PRO 5 Ubuntu Edition vao haingana. Amin'ity tranga ity, ny Meizu MX 6 Ubuntu Edition tsy nanatsara be ny lafiny teknika raha ampitahaina amin'ny maodelin'ny kilasy iray ihany.
Ny terminal vaovao dia ho avy miaraka a Efijery 5.5-inch miaraka amin'ny vahaolana FullHD amin'ny 1920 × 1080 teboka. Ny processeur fitaovana dia ny Mediatek MT6797, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Helio X20, ary izany dia hanome fahombiazana tena tsara ho an'ny rafitra iray manontolo noho izany processeur misy 10 cores nozaraina toy izao manaraka izao: a 72 GHz Cortex-A2.3 dual core processeur, 53 GHz Cortex-A2 quad core processeur ary 53 GHz Cortex-A1.4 quad core processeur farany. Ny RAM misy dia discrete, 3 GB dia ho ampy hampandehanana ny fisoratana anarana tsy misy olana izany, fa maniry fahatsiarovana kely kokoa izahay hanome fiainana lava kokoa ho an'ny terminal mandritra ny fotoana maharitra. Momba ny fahaizana ny tahiry anatiny dia hanana 32 GB, ampy fotsiny amin'ity lafiny ity.
Ny toerana misy ity terminal vaovao ity dia miavaka amin'ny fampitaovana fakan-tsary miaraka amina vahaolana izay miavaka amin'ny salan'isa ary mametraka azy eo amin'ny faran'ny terminal. Miresaka momba ny a Fakan-tsary 8 MPx anoloana ary 20.7 MPx aoriana, mihoatra ny ampy hahazoana fakana sary tsara ary, raha manome sensor tsara izy ireo, dia hanome sary tsara anay izy ireo. Nisy ihany koa ny fitandremana nomena a bateria malala-tanana amin'ity fitaovana ity, 4000 mAh sy mpamaky rantsantanana, satria efa nanana ny maodelin'ny PRO 5 an'ity marika ity ihany aho.
Farany miresaka momba izany isika vidiny, € 399, ary ireo loko voamarina izay hamidiny, volafotsy sy volamena metaly raha tsy misy ny fanamafisana raha hisy hafa amin'ny ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone » Ny famaritana ny Meizu MX6 Ubuntu Edition vaovao dia naseho
fitsinjaram-pahefana dia hoy izy:
Raha tsy misy HDMI….
Mamaly ny fisian'izany
Tokony hamorona mifanentana amin'ireo rindranasa Android izy ireo.
Azonao antoka ve fa ireo no fakantsary hoentiny? Satria ny MX6 dia manana 12 mpx sy 5 mpx. Ary ny bateria dia manodidina ny 3000mAh. Raha toa ka manao toa ny PRO 5 izy ireo dia mitovy fitaovana ho an'ny Android sy Ubuntu.
Hiseho ny volana jolay ho avy izao ny Linux Mint 18 KDE sy ny Xfce Edition